မုဒုံမြို့နယ် ကွမ်တာကျေးရွာအဝင်လမ်းအနီး ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူအအသေအပျောက်များပါတယ် Live
မုဒုံမြို့နယ် ကွမ်တာကျေးရွာအဝင်လမ်းအနီး ယာဉ်နှစ်စီး မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူအအသေအပျောက်များပါတယ် Live ချစ်ခင်လေးစားရပါတဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးခမျာ မုဒုံမြို့နယ် ကွမ်တာကျေးရွာနားမှာ ယာဉ်နှစ်စီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိပါတယ်။ လူအသေအပျောက်လည်းများပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပါရှိပီး အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်။ ကယ်ထုတ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ အော က်စီဂျင်ပိုက် လှမ်းပို့ပေးထားရပါတယ်။ […]
မကွေးမြသလွန်စေတီတော်ကြီးမှာ ကျောက်စိမ်းလက်စွပ်တစ်ကွင်းဌာပနာထားလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေသက်ထားဆွေ
မကွေးမြသလွန်စေတီတော်ကြီးမှာ ကျောက်စိမ်းလက်စွပ်တစ်ကွင်းဌာပနာထားလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေသက်ထားဆွေ ငယ်စဉ်ကတည်းက မြန်မာသံစဉ်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုက်လာတဲ့ မေသက်ထားဆွေကတော့ မကွေးမြသလွန်စေတီတော်ကြီးမှာ ကျောက်စိမ်းလက်စွပ်တစ်ကွင်း ဌာပနာထားလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို“မကွေးမြို့ မြသလွန်စေတီတော်ကြီးသို့ ဘုရားဖူးသွားရင်း စေတီတော်ကြီး၏ စိန်ဖူးတော်နှင့် ငှက်မြတ်နားတော်တို့ကို အပူဇော်ခံထားရှိချိန်နှင့် ကြုံကြိုက်၍လျှပ်တပြက်ကုသိုလ်အဖြစ်သမီးရဲ့ ကျောက်စိမ်းလ က်စွပ်လေးကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်” လို့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာသံစဉ်တွေနဲ့ […]
မီတာခကှာနလြှေငျ ဒါကို သတိပွုပါ သတိပြုကြဖို့ပါ။ကျွန်မတို့နေအိမ်ကို Nov လအတွက် မီတာစာရွက်ရောက်လာပါတယ်။Dec 20ရက်နေ့က မီတာခ​ဆောင်ဖို့အတွက် စာရွက်ကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ပုံမှန် ၂သောင်းဝန်းကျင် ဆောင်နေကျက ဒီလ ၅သောင်းကျော်တယ်ဆိုတော့ ”ဟာ..မဟုတ်သေးဘူး” ဘယ်နားလွဲနေလဲပေါ့။ကျမအမျိုးသားက စာရွတ်ပေါ်က သုံးစွဲယူနစ်ကို သေချာစီစစ်ကြည့်ပြီး အိမ်က မီတာဘောက်နဲ့ တိုက်စစ်ြ ကည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ […]
ရီလည်းရီရ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ကြက်တူရွေး။ သူ့သခင်က သူ့အိမ်ကိုဖျက်လို့ ရန်လုပ်နေတာဗျာ Video
ရီလည်းရီရ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ကြက်တူရွေး။ သူ့သခင်က သူ့အိမ်ကိုဖျက်လို့ ရန်လုပ်နေတာဗျာ Video ဒီတစ်ခါမှာတော့ အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ကြက်တူးရွေးတစ်ကောင်ကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ လူတွေက ချစ်လို့ဖြစ်စေ၊ အဖော်အဖြစ် ဖြစ်စေ တခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်ဖြစ်စေ ကြောင် ခွေး မျောက် ၀က် ကြက်တူရွေး စသဖြင့် တိရစ္ဆာန်များကို မွေးမြူကြပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာ […]
နေကြပ်နေပီဗျို့ ယနေ့ နံနက် 10နာရီကနေ နေ့ခင်း 1နာရီအထိVideo
နေကြပ်နေပီဗျို့ ယနေ့ နံနက် 10နာရီကနေ နေ့ခင်း 1နာရီအထိVideo အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ အခု 26.12.2019 နေ့ 11နာရီ ဆယ်မိနစ်လောက်မှာ နေကျပ်သွားပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း မမြင်လိုက်ရဘူး မသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လည်း သိလိုက်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း 10နာရီကနေ စတင်ပီးကျပ်နေတာဖြစ်ပီး မွန်းလွဲတစ်နာရီမှ ပီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ […]
26.12.2019မှ 1.1.2020အထိ ၇ရကျသားသမီမြားအတှကျး တဈပတျစာကံကွမ်မာဟောစာတမျး
26.12.2019မှ 1.1.2020အထိ ၇ရကျသားသမီမြားအတှကျး တဈပတျစာကံကွမ်မာဟောစာတမျး တနင်္ဂနွေ ဒီကာလကတော့ အလုပ်လည်း အဆင်ပြေမယ်။ အိမ်တွင်းရေးလည်း သာယာနေမယ်။ စိတ်တို စရာ ကြုံလာရင်လည်း ကိုယ်ကပဲလျှော့လိုက်ပါ။ လိင်မတူသူတွေနဲ့ဆက်ဆံရာမှာသတိထားပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ စကား မှားသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တွေကတော့ စိတ်ကူးသစ်အကြံအစည်သစ်တွေကိုဦးစားမပေး သင့်ပါ ဘူး။ လူကြီးတွေ၊ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပက်သက် ဆက်နွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများအခက်အခဲများပါတယ်။ အချစ်ရေး […]
အောက်လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်​ခံထားရရင်တောင် ပြန်ပွင့်စေတဲ့နည်း အောက္လမ်းပညာနျဲ့ပုလုပ်​ထားသည့်တိုင် ပိတ်နေတဲ့ကျံပန္ပြင့်လာစေမည့် အစြမ်းထက်သည့်နည်း… ဖန်​ခြက် ၂ခြက်​ ထဲ ဆာျးပည့်​ ထည့််​ သံပရာသီး အဝါ ၁လုံးစီး တင်​ ​အရိုးတံပါ ငရုပ်​သီးအျေခာက်​ အ​တောင့်​ ရွည်​ ၁​တောင့်​ စီ စိုက်​ […]
အဘိဓမ်မ ပိဋကတျ တဈပုံဆောငျ အမြိုးသမီး
အဘိဓမ်မ ပိဋကတျ တဈပုံဆောငျ အမြိုးသမီး ဒီကနေ့ ၅၂ကြိမ်မြောက် အဘိဓမ္မစာတော်ပြန်ပွဲ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ဟာ ထူးခြားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် အတွင်း ပထမဦးဆုံး ပိဋကတ် တစ်ပုံဆောင် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ တကယ် အားတက်စရာပါပဲ။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေလည်း […]
မကျြနှာနှငျ့နှုတျခမျး တဈဝိုကျမှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရငျ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ သူများကို […]
ငါ ! ဗိုလျမှူးအငွိမျးစားကှ
ငါ ! ဗိုလျမှူးအငွိမျးစားကှ ငါ ! ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားကွ ။ နောက်ခန်းထဲမှာ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားပါတယ် ။ စသည့်ဝိတ်သုံးပြီးစကားဆိုခဲ့သူကို ဥပဒေဘောင်တွင်းကပြန်လှန်နှိမ်ကွပ်ခဲ့သော ရဲတယောက် ။ “ဟေ့ကောင် ငါ ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနော်” တဲ့ကြည့် ဘာမှတောင်မပြောရသေးဘူး ကားလေးတားမိတာနဲ့တန်းပြောတာ ငါဗိုလ်မှူးအငြိ်မ်းစားနော်တဲ့ ဝိတ်သုံးတဲ့သဘောလား ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့သဘောလားတော့မသိ။ “ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာ […]